वर्षौंदेखि मानव छाला महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू undergoes र कमीकमजोरी धेरै प्राप्त। पीडित अनुहार, झुर्रियाँ ढाकिएको छ जो, आफ्नो लोच र रंग हराउछ। र उमेर को समस्या हो आँखा अन्तर्गत बैग। निस्सन्देह, त्यहाँ तिनीहरूले साना मान्छे मा, तथापि, हो धेरै कम संभावना छ। पहिलो नजर मा, एक अहानिकारक बैग उपस्थिति देखि घट र अनुहार थकित र पीडादायी देखिन्छ।
तिनीहरूले के बुझाउँछ? आँखा अन्तर्गत बैग - तरल पदार्थ को यो संग्रह sagging Tissues निम्त्याउँछ के हो भनेर। जवान मानिसहरू देखि छाला आँखा अन्तर्गत बैग थप लोचदार छ, र यो कम गर्न विषय हो। तर पाको मान्छे, ज्यादातर महिलाहरु, र त्यहाँ एक तरल संग अन्तर्गत-आँखा बैग को उपस्थिति छ।
कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न आँखा अन्तर्गत बैग? यो प्रश्न निरन्तर यो कुरूप छाला दोष को मालिक द्वारा आग्रह गरिएको छ। को चिकित्सकीय उपाय गर्न अघि बढ्नु अघि कारण पहिचान हुनुपर्छ।
यस अन्तर्गत बैग को कारण आँखा धेरै फरक हुन सक्छ। तिनीहरूले दिन, सुत्न, तनाव, थकान को कमी को गलत समय मा देखा पर्न सक्छन्। एक व्यक्ति धूम्रपान गर्दछ र पनि बैग देखिन सक्छ आफ्नो आँखा अन्तर्गत रक्सी को एक ठूलो रकम प्रयोग भने। केही अवस्थामा, आँखा अन्तर्गत बैग कुनै पनि हृदय रोग, मृगौला वा कलेजो उपस्थिति संकेत गर्छ। कारण मोटे मान्छे धेरै छ जो क्युटेनियस बोसो सामेल छन्। अतिरिक्त बोसो पनि अत्यधिक हुँदा, मांसपेशिहरु अब उसलाई फिर्ता पकड गर्न सक्षम छन्, त्यसैले उहाँले आँखा अन्तर्गत बैग को रूप मा बाहिर sticks।
यो बेफाइदा धेरै मान्छे जन्मेका छौं। एक व्यक्ति को यो anatomical सुविधा पारंपरिक विधि द्वारा सही हुन सक्छ, त्यसैले अन्तर्गत बैग को छुटकारा प्राप्त गर्न मात्र सर्जरी मार्फत आँखा।
को बैग लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको मालिश छ। त्यहाँ मिति यसलाई धेरै प्रकार छन्। लसीका जल - विशेष उपकरण प्रयोग गरेर मसाज। यो रगत प्रवाह र लसीका परिसंचरण सुधार र आँखा अन्तर्गत puffiness हटाउन मद्दत गर्छ। dermatoniya - - मालिश अर्को प्रकार एक निर्वात प्रक्रिया, छाला सतह विभिन्न दबाबको गर्न प्रभावित छ जुन बेलामा छ। यो मालिश कक्षहरू, गहिरो छाला अन्तर्गत स्थित जुन बढवा दिन्छ। घरमा, यो मालिश यो संग आँखा अन्तर्गत बैग यति छुटकारा प्राप्त गर्न र अघिल्लो प्रक्रिया मात्र सना मा सम्भव छ, snuff सम्म छैन। अर्डर परिणाम प्राप्त गर्न, तपाईं 10-15, र केही अवस्थामा, र थप प्रक्रियाहरु खर्च गर्न आवश्यक छ।
अब म कसरी कुरा हुनेछ घर मा आँखा अन्तर्गत बैग हटाउन। स्टार्टर्स लागि, तपाईं एक मालिश प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईं हरेक दिन यो भने मात्र मामला मा सुनिंनु हटाउन मद्दत गर्नेछ। , आँखा वरिपरि सुरु गर्न आँखा अन्तर्गत बैग लागि विशेष क्रिम लागू, र त्यसपछि यो RUB गर्न औँलामा संग बिस्तारै सुरु: घर मालिश त्यसो गर्नुभएको। बाह्य - यो ज्योति नल प्रयोग गरिन्छ, माथिल्लो पटल मालिश आँखा को भित्री कुनामा, र तल्लो पटल बाट सुरु गर्नुपर्छ। खैर, मालिश विशेष मालिश अंक को मद्दतले गर्न सकिन्छ।
राम्रो चिया compresses संघर्ष आफ्नो आँखा अन्तर्गत बैग संग लोक उपचार देखि। यसो गर्न, तपाईं बलियो चिया बनाउनु पर्दछ। त्यसपछि यो swabs moisten र तिनीहरूलाई प्रति आँखा 10 मिनेट मा राख्न आवश्यक छ। आँखा र बरफ घन अन्तर्गत puffiness विरुद्ध प्रभावकारी। chamomile, कैलेंडुला, ऋषि: यो सबै भन्दा राम्रो जडीबुटी को infusions देखि बनेको छ।
यो एक द्रुत परिणाम आशा हुँदैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ, त्यसैले घण्टा एक जोडी लागि आँखा अन्तर्गत बैग को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी सफल असम्भाव्य छ। र उनको घटना रोक्न क्रममा, तपाईं, एक स्वस्थ जीवन शैली कायम गर्नुपर्छ स्नायु हुन र केवल स्वस्थ खाना खान बन्द गर्न खराब बानी हरेस। सावधानीको रूपमा, तपाईं आँखा वरिपरि massaged गर्न सकिन्छ, यो पनि puffiness को उपस्थिति रोक्न मद्दत गर्छ।
अनुहार छाला हेरविचार: शुद्ध, मइस्चराइजिंग, पोषण, सुरक्षा
"MitoVitan": समीक्षा। अनुहार झुर्रियाँ द्वारा कायाकल्प सीरम, व्लादिमीर Skulachev द्वारा सिर्जना
Peeling retinoic: सङ्केत गर्छ, contraindications र समीक्षा
टैटू: आवेदन पछि टाटु उचित हेरविचार
यस चित्रकला "स्वर्ण शरद" Ostroukhova इल्या Semenovich को विवरण
जेल "Diclofenac": समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन
Calipers लागि चिल्लो
अल्कोहल को रासायनिक गुण
तपाईं बच्चाहरु ओसारपसार गर्न एक बस आदेश गर्दा थाहा पाउनुपर्ने
दबाइ "Mirtazapine": प्रयोग, analogs, साइड इफेक्ट र समीक्षा लागि निर्देशन
Windows7मा इन्टरनेट कसरी गति बढाउने? इन्टरनेट
Astilbe फूल - मनपर्ने छायादार बगैचा
फ्रिगेट "एडमिरल Makarov"। लडाकू जहाज 11356
Trempel के हो? यो चिरपरिचित उपकरण छ!